Akon'ny Fivorian'ny Ray aman-dReny Sekoly Alahady Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Fandaharana ZAIKAKELY KTLM SP FLME_2016_Fil. IDF Fanambadiana
10/04/2016 Akon’ny Alahadin’ny FDL Nasionaly
10/04/2016 Akon’ny Fivorian’ny Ray aman-dReny Sekoly Alahady
Misaotra an’i Jesosy isika fa vita soa aman-tsara ny fivorian’ny Ray aman-dReny Mpianatra Sekoly Alahady eto amin’ny Fiangonantsika, natao ny Alahady 10/04/2016 lasa teo.
Niarahana tamin’ny Raiamandreny Pastora RASETA izany fivoriana izany, ka nandinihina indrindra ny jery todiky taona lasa, ireo kilasy misy eto amintsika, ny fizotry ny fampianarana, ireo fandaharana mandavan-taona, ny fiofanan’ny mpampianatra fa indrindra ny fifanakalozana teo amin’ny Ray aman-dReny sy ny Mpampianatra momba ny fitaizana sy ny fanabeazana azy ireo.
Nosintonina tamin’izany fa miara-misalahy amin’ny fanabeazana na ireo Ray aman-dReny, na ireo Mpampianatra, na ny Fiangonana. Mametraka ny Ray aman-dReny ho tompon’andraikitra voalohan’ireo zanany koa izany, ary ireo mpampianatra ho mpanampy azy.
Noresahana koa izay ahazoan’ny zaza ny anjara toriteniny, sy ny fampiasàna ny teny Malagasy ary ny fanomezana sehatra ho azy ato am-piangonana.
Nomarihina manokana ny samy hananan’ny mpianatra tsirairay fitaovana hoenti-mianatra Sekoly Alahady: kahie, penina, Baiboly sy Fihirana (boky fa tsy tablette na anaty smartphone).
Nitondra ireo hetahetany koa moa ireo Ray aman-dReny ary niaraha-nifampizara izany.
Ny fotoana nivoriana indray no toa fohy raha oharina tamin’ny lohahevitra noresahana. Isaorana feno tompoko ianareo namaly ny antso an-kitsimpo. Ho an’ireo Ray aman-dReny tsy tonga tamin’io fotoana io dia afaka manatona ireo mpampianatra isan-kilasy avy ahazoana ny fandaharana mandavan-taona sy izay hevitra tiana ampitaina na fanamarihana manokana.
Dia hitohy hatrany anie ny fiaraha-miasantsika ahasoa ireo ankizy beazina ato amin’ny Sekoly Alahady, ka izy ireo no ho taninketsan’ny Fiangonana tokoa, ho mpianatr’i Jesosy tokoa.
Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
Hizara amin'ny Facebook Hizara